“မိသားစု စကားဝိုင်း”… – PVTV Myanmar
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ အာဇာနည်၊ ဒေါင်း၊ မြနှင်းရည်လွင်တို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာနဲ့ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေများ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြမလဲ … စောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Like – 30K Share – 2024
FamilyTalkPublic Voice TelevisionPVTVPVTV MyanmarSpringRevolution
2021-08-20 at 10:09 PM
အမှန်တရားက ဘယ်တော့ မှ မမှား အမှားလုပ်တဲ့သူ အပြစ်ကြီး ထိုက်ပါစေ ပြည်သူ ကျိန်စာ 🙏🙏🙏
Win Win Nwe says:
အဲဒါဆို မနက်ဖြန်ည သံပုံးမတီးရဘူးလား 😋
TV channelကရော မလွှင့်ဘူးလားဗျ
2021-08-20 at 10:13 PM
ဘယ်နေ့ အချိန် ပြောပေးပါ
Chitya Htoo says:
2021-08-20 at 10:30 PM
ယုံကြည်ရာ တခုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရဲလား
ကျနော့နောက်မှာ ဆိုတာ ထည့်တွက်နေကျတာပဲမလား
ယုံကြည်ရာအတွက် ဘယ်လိုပဲ တိုက်ပွဲသွားသွား
သွားနေသူတွေကိုတော့ စွန်း လေးစားတယ်
ကိုလူ ဇိုး says:
2021-08-20 at 10:51 PM
2021-08-21 at 2:27 AM
Where is Ar Zarni now? Is he in the liberated area as well?
Tiffany Theint says:
2021-08-21 at 8:12 AM
အာဇာနည် အစား မင်းမော်ကွန်း ထဲ့ရမှာ စကားပြောလဲ ပိုကောင်းတယ်
2021-08-21 at 8:16 AM
ကိုမင်းမော်ကွန်း မထားထားထက် မပန်တို့ကိုလည်း ထည့်ပေးပါ
Khayme Ko says:
2021-08-21 at 3:15 PM
Aung Chan Myae says:
Wah Wah Myint says:
2021-08-21 at 3:30 PM
2021-08-21 at 4:03 PM
ဟုတ်ဘူးဗျ ဒီည ၈နာရီ
2021-08-21 at 4:40 PM
2021-08-21 at 5:06 PM
Daw Phyu PhyuWin says:
2021-08-21 at 5:36 PM
2021-08-21 at 8:12 PM
Rosa Nco says:
2021-08-21 at 8:21 PM
Khaing Zon says:
2021-08-21 at 8:31 PM
2021-08-22 at 10:16 AM
တင်ဇော်ဝင်း ဗမာ says: